UKUHLALA KWEZOMTHETHO NGOKUTSHALWA KWE-UK | IZINGA 100% LOKUPHUMELELA | OKUTHENGEKAYO | I-GOLDEN VISA ye-UK, Ukufuduka Kwezomnotho ngokutshala imali yokuhlala e-UK ngokutshala imali e-UK, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK, ukuhlala ngezinhlelo zokutshala imali UK, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwe-UK ne-Golden Visa
Sinikezela Ngosizo Lwezokufuduka Komnotho e-UK ngalokhu:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela e-UK
● I-visa yegolide e-UK
● Iphasipoti yesibili evela e-UK
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-UK kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngo-Investment e-UK kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala ezakhiweni zangempela e-UK basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali e-UK kunikela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali e-UK, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-UK, Ukuhlala kabusha okwesibili ngokutshalwa kwezimali e-UK, ukuhlala kabili ngokutshalwa kwezimali e-UK, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK , Ukuhlala unomphela ngokutshala imali e-UK, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali e-UK, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-UK, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali e-UK, Ubuzwe ngokutshala imali e-UK, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali e-UK, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali e-UK, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali e-UK, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali e-UK, indawo yokuhlala nobuzwe ngokutshalwa kwezimali e-UK, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali e-UK, izinhlelo zezomnotho e-UK, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali e-UK, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali e-UK, okwesibili ipasipoti e-UK, izinhlelo zesibili zepasipoti e-UK, uhlelo lwesibili lwephasipoti e-UK, iphasiphothi yesibili yase-UK, indawo yokuhlala kanye nepasipoti yesibili i n UK, ipasipoti yesibili yezokuxhumana e-UK, ipasipoti yesibili ngokutshalwa kwezimali e-UK, ipasipoti yesibili yobuzwe e-UK, uhlelo lwesibili lwamaphasipoti e-UK, izinhlelo zepasipoti yesibili e-UK, i-visa yegolide e-UK, ama-visa egolide e-UK, izinhlelo ze-visa zegolide e-UK, Uhlelo lwe-visa yegolide e-UK, i-visa yesibili yegolide e-UK, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide e-UK, i-visa yegolide emibili e-UK, ubuzwe kanye ne-visa yegolide e-UK, ukuhlala kanye ne-visa yegolide e-UK, ubuzwe be-visa base-UK, uhlelo lwe-visa lwegolide e-UK , izikimu ze-visa zegolide e-UK.
"1 stop solutions" yakho yonke i-Residency yakho ngokutshala imali e-UK ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane e-UK for Residency by Investment: GBP 50,000
Isingeniso UK ne Residency by Investment
Funda kabanzi nge-UK
I-United Kingdom, ehlanganisa iGreat Britain (iNgilandi, iWales neScotland) neNyakatho ye-Ireland, iphindwe kabili ubukhulu beNew York State. IBrithani, engxenyeni eseningizimu-mpumalanga yeBritish Isles, ihlukaniswe neScotland ngasenyakatho ngetshe iCheviot Hills; okusuka kubo uchungechunge lweziqongo zasePennine lukhuphuka lubheke eningizimu ludlule enkabeni yeNgilandi, lufike endaweni yalo ephakeme kakhulu eLake District enyakatho-ntshonalanga. Ngasentshonalanga ngasemaphethelweni eWales — indawo eyaziwa ngemithambeka emikhulu nezigodi — kukhona Izintaba ZaseCambrian, kuyilapho iCotswolds, ububanzi bemithambeka eGloucestershire, ifinyelela kulokho kuqhaqhazela okuhlanganisa.
Imigwaqo emikhulu yamanzi egelezela oLwandle lwaseNyakatho yiThames, iHumber, iTee neTyne. Entshonalanga kukhona iSevern neWye, engena esikhaleni seBristol futhi edabukisayo, efanayo neMersey neRibble.
Ukuqonda amazwe akhethekile, izindawo, abantu, nezindlela zokuphila kungathatha impilo yonke. Kodwa-ke, kunezinto ezithile ezibalulekile umuntu ngamunye owayekade efuna ukuzazi ngaphambi kokuba athathe isinyathelo.
Umbuso owodwa, izizwe eziningi
I-UK inezizwe ezine: iNgilandi, iScotland, iWales neNyakatho ye-Ireland. Ngayinye inesiko nobuntu bayo obunomusa, obuqinisekiswa ngonya ngabantu bendawo.
Izifunda ezahlukahlukene nemiphakathi yasemadolobheni ngaphakathi kwazo zonke izizwe ngokufanayo zinobuntu bazo. Kuvame ukushiwo ukuthi abantu abavela eNyakatho yeNgilandi baqonde kakhulu futhi baqotho kunabo abavela eNingizimu, ngokwesibonelo. Noma ngabe ukufanele kangakanani ukuthola ukuthi lawa ma notorieties ukuthi abe yiwona azothembela ikakhulukazi kubantu ohlangana nabo!
I-UK iyisizwe esinamasiko amaningi futhi ngokwehlukana okukhulu kwazo zonke izinkolelo nemiphakathi. Ukuhlukaniswa okuxhomeke kubuhlanga, ubulili, ukuqondiswa kwezocansi, ubudala, noma ukukhubazeka akukho emthethweni. Ukuchithwa okuningi kudonselwa e-UK ngenxa yalokhu kuhlukahluka, kucatshangwa ukuthi yindawo ekhangayo nenokuthula ukuhlala.
Noma kunjalo kwehlukile isihlobo sayo, kunezici ezithile eziyisisekelo ezabiwe iningi lamaBrits. Zidunyiswa ngokubamba kwazo, azithambekele ekwethulweni okuhle kwemizwa, futhi zikufanele ukuphepha kwazo. Lokhu kungaholela ekuphathweni okumbalwa kwangaphambili ukuthi kube sengathi "bayabanda" - noma bayadelela - zisuka nje. Yize lokhu kungakhawulela izingxoxo ezimotweni ezivulekile, kungekudala uzothola ukuthi iBrits ingafudumala futhi ithakazelise njenganoma yimuphi omunye umuntu.
Ngempela, amahlaya ayadingeka ngokumangazayo eBrits - ikakhulukazi amandla okuzithwebula! Yiba noma kanjani, ungadidanisi ubumnandi babo bokuziveza nokungabikho kokwesaba. Ngokuyisisekelo ukuthi bakwazisa ukucatshangelwa nemikhuba emihle, futhi kubhekwa “njengokuziphatha okungafanele” ukujabula.
Ama-ex-pats amaningi athola ukuthi kufanele athole ukuthi angathola kanjani indaba yangempela lapho ekhuluma neBrits. Abanye bangathanda ukunikeza impendulo engacacile kunengozi ebangela ukucasula - ngakho-ke kungadingeka ukuthi ulalele ngokucophelela ukuthola umbono wabo. Mhlawumbe yingakho iBrits ithanda kakhulu i-banter - ikakhulukazi uma kwenzeka ithinta isimo sezulu!
Sixoxa ngesimo sezulu
Yize ithole udumo ngokuba mnyama, blustery, futhi kubanda, i-UK empeleni inezinkathi zesikhathi esivelele kakhulu nesimo sezulu esihlukahlukene. Ubusika obude, obujwayelekile ngokujwayelekile bungaba yisivivinyo sokukhishwa okuvela kuma-atmospheres ashisayo kepha izinyanga zasentwasahlobo naphakathi nonyaka zivame ukunikela ngento enengqondo yezinsuku ezikhanyayo. Ngempela, noma kubude behlobo, imvula enamandla iba yithuba njalo.
I-UK ingumnotho wesihlanu ngobukhulu emhlabeni lapho ilinganiselwa yi-GDP. Amanxusa amaningi adonswa esizweni ngemiholo ejwayelekile kanye nendlela yokuphila ehloniphekile. Kodwa-ke, lawa maphuzu agxile ekusatshalalisweni ngokulingana kuwo wonke amazwe nezinkampani zawo.
Imisebenzi yokuphatha - ngokwesibonelo, ukubhenka nokuvikelwa - ichume eminyakeni eminingi eqhubekayo, ngenkathi amabhizinisi ajwayelekile -, ngokwesibonelo, ukukhiqiza - enqabile. Njengoba imele izikhundla ezingaphezu kwezinkulungwane eziyinkulungwane emnothweni waseBrithani, ukuhlanganiswa kwezokuphathwa kwezimali eLondon naseningizimu-mpumalanga kusho ukuthi lezi zindawo ziqhume. Izindawo ezahlukahlukene azizwanga kaningi izinzuzo ezifanayo zezimali.
Ama-expats cishe azothola amaholo aphezulu ezifundeni ezichumayo; kodwa-ke, nabo kuzodingeka balwe nezindleko ezinkulu zokuphila. Njengoba izindawo zase-UK zisebenza ngokuthembekile ukulinganisa umnotho wazo - kanye nokuzimisela kwezindawo ezisemadolobheni ezibucayi emhlabeni wonke kubonwe esizweni sonke - ama-ex-pats amaningi angaba nesinxephezelo ngempilo ephezulu ngaphandle kwenhlokodolobha.
AmaBrithani iningi lawo asebenza isikhathi eside. Kuyinto evamile ukubona abantu ozibandakanya nabo behamba nomsebenzi wabo ebusuku kanye nasekupheleni kwesonto. Ngokuvela kwamasu amasha okuxhumana, izincwadi ezimbalwa zakudala zingathola ukuthi kuncike ekutheni zixhumane nomphathi wazo. Ngenjabulo, izingxoxo eziqhubekayo zokuthi lokhu kuthonya kanjani inzuzo kuye kwaqhuba izinhlangano eziningi ukuba zizame ukwenza ibhalansi yempilo yokuphila ephezulu kubasebenzi babo.
Ngenkathi isiko lesikhathi esandisiwe nomsebenzi onzima kuyisisekelo e-UK, abasebenzi nabo bavikelekile ekuhlukanisweni nasekuthetheleleni okungenangqondo ngobubanzi bamalungelo asemthethweni. Izinhlangano eziningi futhi zizama ukunika amandla abameleli bazo ukulungisa ibhizinisi kanye nomndeni - kusizwa ikhefu labazali eliphethwe nguhulumeni, imali yokubeletha / yokubeletha, nokusiza ngezindleko zokunakekela izingane. I-UK inabasebenzi abahlukile, abanamasiko amaningi.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwe-UK
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK
Imali eyengeziwe ye- i-visa yegolide ye UK
I-Tier-1 Innovator / i-visa ye-Entrepreneur kanye ne-Tier-1 Investor visa
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK
Kufanele uphile izinyanga ze-9 ngonyaka e-UK TR naku-PR ngemuva kweminyaka engu-5 (ILR)
Ngemuva kweminyaka engu-6 isiyonke ngesimo se-ILR
Ubuzwe obuBili buvunyelwe izakhamizi zase-UK
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-UK
I- £ 50,000 Tier-1 Innovator / Entrepreneur visa ngokusebenzisa utshalomali lokuqalisa emabhizinisini ase-UK
I- £ 2,000,000 Tier-1 Investor visa ngokutshalwa kwemali kumabhondi kaHulumeni wase-UK, noma imali eyabiwayo ezinkampanini zase-UK. Ukuthengwa kwezindlu akuvunyelwe
Kungani ufuna ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-UK
I-United Kingdom ingelinye lamazwe anamandla amakhulu emhlabeni. Kuthathwa njengomphakathi onamasiko amaningi, 1 yezinsizakalo zokunakekelwa kwezempilo ezingcono kakhulu emhlabeni, amathuba emfundo ephakeme, kanye nomkhakha wezezimali oyingqayizivele. Uhlelo lokuhlala ngegolide lwase-UK lunenqubo esheshayo phakathi kwezinhlelo ezifanayo zamazwe we-G8: imvamisa, imvume ikhishwa ezinyangeni eziyi-6-8. Inqubo ibuye ibhekwe nenqubo eqondile, eqinisekisa umphumela olindelekile. Ngaphezu kwalokho, isimo sabahlali abangabuswanga sinikeza indawo ekhangayo yentela yabantu ababiza kakhulu. Abafakizicelo namalungu emindeni yabo kumele bahlale ezweni hhayi ngaphansi kwe-50% yesikhathi ngemuva kokukhishwa kwemvume yabo.
Ukufuduka komndeni e-UK
Isicelo sokuhlala singabandakanya oshade naye, izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-18 ubudala kanye nezingane ezincike ngokwezezimali ezingaphezu kweminyaka eyi-18. Ngemuva kokuthola imvume yokuhlala, bonke abafakizicelo kumele bahlale e-UK futhi imvume yokuhlala yezingane izonikezwa kuphela uma imvume yabazali bobabili ikhona.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-UK insite
Ukuze ufanelekele uhlelo lokuhlala njengegolide, abafakizicelo kumele bahambise ubufakazi bokuthi banezimali ezanele zokuzondla kanye nabondliwayo ngaphandle kokuthatha umsebenzi.
Kumele futhi wenze i-United Kingdom ikhaya lakho eliyinhloko. Lokho kusho ukuthi awukwazi ukuchitha izinsuku ezingaphezu kwezingu-180 ngonyaka ngaphandle kwe-UK. Awudingi ukufakazela isipiliyoni sokuphathwa kwebhizinisi noma amakhono esiNgisi kuleli qophelo.
Uzoqala uthole i-Tier 1 visa izinyanga ezingama-40, futhi kufanele wenze utshalomali olukhethiwe ezinyangeni ezintathu zokungena. Imvume yokuhlala, ngemuva kokuphela kwesikhathi sokuqala sezinyanga ezingama-40, izokwelulwa iminyaka emibili uma uqhubekile nokwanelisa izicelo ngesikhathi sakho sokuhlala.
Ngemuva kweminyaka emihlanu uzokuba yisakhamuzi saphakade. Ngalesi simo kufanele ukhombise ulwazi lwesiNgisi, isi-Welsh noma iScotland ulimi lwesiGaelic nokujwayela okuyisisekelo ngempilo namasiko ase-United Kingdom. Uzothola nethuba lokufaka isicelo sokuba yisakhamuzi sase-United Kingdom.
Izidingo zezezimali ze-UK
Ukuze bathole ukuhlala okwesikhashana iminyaka emihlanu bese behlala unomphela, abafakizicelo kumele batshale i-GBP 2 million. Amaphesenti angama-75 okutshalwa kwezimali kumele abe ngesimo samabhondi kahulumeni noma utshalomali lwebhizinisi kuthi amaphesenti angama-25 asetshenziselwe ukuthenga izimpahla noma ukufaka idiphozi ebhange.
Uma ufuna ukuthola indawo yokuhlala unomphela ngokushesha, kufanele ukhuphule inani lotshalo-mali. Tshala imali nge-GBP 5 million, uzoba ngumhlali unomphela eminyakeni emithathu, kuthi nge-GBP 10 million, isikhathi sokuhlala unomphela iminyaka emibili kuphela. Lokhu kusebenza kuphela kumfakisicelo omkhulu hhayi kubondliwe. Laba bazothola indawo yokuhlala unomphela ngemuva kweminyaka emihlanu ngaphansi kwazo zontathu izindlela zokutshala imali.
Ukusekelwa kwamakhasimende kokuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala ngama-Investment Agents ase-UK futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli Okwe-UK inikeza amaklayenti nemindeni yawo e-UK ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela e-UK, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela e-UK namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshala imali okuvela e-UK noma i-Golden Visa yase-UK noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela e-UK noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshalwa kwezindlu ku-UK, sinikeza isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani I-UK noma i-offshore, izinsiza zabantu e-UK nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwe ekubeni yisakhamuzi e-UK nasendaweni yokuhlala yesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi Zase-UK:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali Okwe-UK, ngokungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika Okwe-UK, abaceli bezokufika abatshalizimali abangabizi kakhulu e-UK, Indawo yokuhlala engabizi ngabacwaningi bezokutshalwa kwezimali e-UK, Indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-UK kanye nefemu yabeluleki bokufika e-UK
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kusuka e-UK kuye emazweni angama-37.
I-visa yegolide e-UK emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka e-UK kuye emazweni angama-37.
Iphasipoti yesibili esuka e-UK iye emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa e-UK kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela e-UK.
Izinhlelo ze-visa zegolide e-UK emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka e-UK ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezisuka e-UK ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe zisuka e-UK ziye emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kwe-UK ngeReal Estate
Sinikeza ukusekelwa kokutshalwa kwezindlu ku-UK ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwemali e-UK, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali e-UK. Sibophelene nabathuthukisi bezindlu abambalwa e-UK abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle e-UK, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezinhle kakhulu zokuhlala e-UK ngokutshalwa kwezimali ku-real estate e-UK.
Udinga ukwazi - UKUhlala kabusha kwe-UK Ngotshalomali
Ukuhlala kabusha ngummeli wezokutshalwa kwezimali e-UK kuzonikeza ngosizo lwemibhalo eningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali e-UK. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK zifaka:
Abameli bethu bazoziqonda izidingo zakho zokuthuthela e-UK noma e-UK, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK kumakhasimende ukuthola i-Residence Permit yase-UK nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala wase-UK, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili ne-Residency yakho ngokufaka isicelo sokutshala imali e-UK sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali e-UK Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali e-UK kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho nje imibhalo yakho neyomndeni wakho ye-Residency ngokufaka isicelo sokutshala imali e-UK isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zase-UK.
Lapho nje isicelo sakho sokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali e-UK kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi ase-UK:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali e-UK akunikelwa kubaHwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu ezivela noma eziya e-UK.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali e-UK ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe e-UK noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ukuya e-UK.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kwe-UK ahlinzekwa nganoma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu e-UK.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali Okwe-UK akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic e-UK.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali e-UK akuyona eyamabhizinisi asebenzisana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi e-UK.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kwe-UK akutholakali kubantu base-UK abasebenza ngokuhweba, ukugcina e-UK, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali Okwe-UK akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo Okwe-UK akuzona ezezenkolo namahlelo abo ezinsiza e-UK.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku UK ayihlinzekwa kubantu abasebenza Izithombe Zobulili Ezingcolile e-UK.
Ukuhlala kwethu abameli e-UK ayisekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa e-UK.
“Isaziso Esibalulekile : AbakwaMM Solutions INC bathatha ukunakekela okufanelekile ukuze baqinisekise imibhalo ye-AML yamakhasimende e-UK kanye ne-KYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla e-UK ukuvunywa kwesicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokusekelwa kokutshalwa kwezimali e-UK ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe nokuhlela izindlu e-UK.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zase-UK, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali e-UK inikela ngamanani ashibhe kakhulu, anezinga lokuphumelela elingafinyeleleka kangcono e-UK.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yokuhlala kabili ku-UK asekela amaklayenti nemindeni yawo e-UK.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bezokutshalwa kwezimali e-UK nabasebenzeli bezomthetho base-UK abanikeza ukwesekwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu nabasebenzeli benqubo yokuphatha yase-UK kanye nesicelo abazibophezele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho e-UK nangemva kokuvunyelwa, ilungu leqembu lethu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukwesekwa komuntu siqu e-UK
Sinesipiliyoni samazwe omhlaba ku-Residency ngokutshala imali kufaka phakathi i-UK, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali e-UK kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya e-UK
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende e-UK, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lwase-UK nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa Okwe-UK
Inqubo Yemvume Yokusebenza yase-UK
Indawo yokuhlala okwesikhashana e-UK
Indawo yokuhlala unomphela e-UK
Ama-Embasi nama-Consulates ase-UK
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali e-UK nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka e-UK ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela e-UK nomndeni wakho ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho we-UK, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nangesikhathi ongadinga ngaso e-UK ngamanani aphansi.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali e-UK, sihlinzeka ngamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR nase-UK, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi base-UK abasenza isitolo esisodwa se-UK namazwe we-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu ngabanye kanye nosomabhizinisi base-UK ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali e-UK ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha e-UK nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani e-UK noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani e-UK zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange e-UK
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela e-UK uzodinga i-akhawunti yakho yasebhange e-UK kanye ne-akhawunti yasebhange yenkampani e-UK, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Isango lokukhokha e-UK
Kungenzeka ukuthi udinga ukubonisana e-UK, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali e-UK Njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech e-UK noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze UK uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona e-UK ukuqala okusheshayo e-UK.
Izinsizakalo ze-HR e-UK
Our inkampani yezabasebenzi e-UK ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga thumela izikhala e-UK free.
Izinombolo zefoni ezibonakalayo ze-UK
Izinhlelo zebhizinisi ze-UK kanye ne izinombolo ezibonakalayo ze-UK Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali e-UK
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele e-UK nase okuningi.
Ikheli lehhovisi elibonakalayo e-UK
Setha ibhizinisi e-UK
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK, isethaphu ibhizinisi ku UK.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi e-UK
Ukwakhiwa Kwewebhu e-UK
Ukuthuthukiswa Kwezomnotho e-UK
Ukuthuthukiswa kwewebhu e-UK
Ukuthuthukiswa kweBlockchain e-UK
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza e-UK
Ukuthuthukiswa Kwesoftware e-UK
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-UK
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo ze-Investment e-UK nokuphumelela kwamakhasimende ethu kubaluleke kakhulu, ngoba i-UK, singabaholi, inkampani yethu yezomthetho yase-UK inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika nase-UK, sinedumela lokuletha isipiliyoni sokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu e-UK nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu base-UK nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali e-UK kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuhlakani zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala e-UK, lapho imvume yakho yokuhlala e-UK ivunyelwe.
Amandla wommeli wase-UK ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-UK. Uma use-UK noma uhlela ukuvakashela e-UK, singawathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani ye-UK ukude, amandla akho abameli kufanele agunyazwe ngokusemthethweni ukuthi asetshenziswe endaweni yase-UK. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ngabe ligcotshwe noma ligunyazwe ngokomthetho yi-consulate yase-UK.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-UK
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali e-UK?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala yase-UK ngokutshalwa kwezimali emnothweni wase-UK ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, izindlu nomhlaba, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali e-UK, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali e-UK kusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali e-UK, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezotshalomali e-UK, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali e-UK kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali e-UK, abasebenza kakhulu ezindaweni zokuhlala ngabatshali bezimali e-UK, kanye namafemu amahle abonisana nabokufika e-UK.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali e-UK | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali e-UK | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment e-UK | Ukuhlala kabusha ngabameli bokutshala imali e-UK | Ukuhlala kabusha ngabacwaningi bokutshala imali e-UK
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali e-UK?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali e-UK, kungachazwa ngokuthi, ukuthola ubuzwe base-UK ngokutshalwa kwezimali emnothweni wase-UK ngezindlela ezahlukahlukene ezifana, ibhizinisi, ingcebo, amabhondi kahulumeni, njll e-UK. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali e-UK, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali e-UK olwesekelwa ubuzwe ngezinsizakalo zokutshalwa kwezimali e-UK, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezotshalomali e-UK, ubuzwe obuhle ngabameli bezotshalomali e-UK nobuzwe obuhle ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali e-UK, abasebenza ubuzwe obuhle ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali e-UK, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika e-UK.
Izinsizakalo zokungena kwabatshalizimali ezingabizi kakhulu e-UK | Ababizi bokufika abafinyelelekayo e-UK | Abameli abangabizi bezimali zabokufika e-UK | Abameli abangabizi bezimali zabokufika e-UK | Ababonisi bezimali abangena mali abangabizi base-UK | Amafemu omthetho wokufuduka afinyelelekayo e-UK
Iyini incazelo yepasipoti yesibili e-UK?
Iphasiphothi yesibili e-UK, ingachazwa ngokuthi, ukuthola izakhamuzi ezisemthethweni zase-UK ngokutshalwa kwezimali emnothweni wase-UK ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, izindlu nomhlaba, ibhizinisi, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili eya e-UK, uhlelo lwesibili lwephasipothi lwe-UK olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili e-UK, ngokusebenzisa abameli bethu besibili abahamba phambili be-passport e-UK, abameli bephasiphothi besibili abahamba phambili e-UK kanye nabeluleki abahamba phambili be-passport yesibili e-UK, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili e-UK, kanye namafemu amahle kakhulu abonisana nabokufika e-UK.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili ze-UK | Abameli bepasipoti besibili e-UK | Abameli bepasipoti besibili e-UK | Abameli bepasipoti besibili e-UK | Abaluleki besibili bepasipoti base-UK
Iyini incazelo ye-visa yegolide e-UK?
I-visa egolide e-UK, ingachazwa ngokuthi, ukuthola imvume yokuhlala e-UK ngokutshala imali kwezomnotho wase-UK ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, amabhondi kahulumeni, ibhizinisi, izindlu nomhlaba, njll. Faka isicelo se-visa yegolide e-UK, uhlelo lwe-visa lwegolide lwe-UK olwesekelwa yi Izinsizakalo ze-visa zegolide zase-UK, ngokusebenzisa abameli bethu be-visa abasahle kakhulu e-UK, abameli abaphambili be-visa basegolide e-UK kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa base-UK, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili e-UK, kanye namafemu abonisana kahle nabokufika e-UK.
Izinsizakalo ze-visa zegolide ze-UK | Abameli bama-visa egolide e-UK | Abameli begolden visa e-UK | Abameli begolide begolide e-UK | Ababonisi be-visa begolide base-UK
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshala imali e-UK?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshala imali e-UK yi-GBP 50,000.
Ngabe unikeza ukusekelwa okusemthethweni kwe-UK for Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu e-UK kanye nabasebenzeli base-UK banikela ukwesekwa kwe-Residency ngokutshala imali e-UK.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali kuya e-UK kuyabiza?
Izindleko Zokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali e-UK kanye Nokuhlala kabusha ngezidingo zesikhwama sokutshala imali e-UK zenzelwe abantu ababiza kakhulu, sibiza imali yokubonisana kuphela nge-Residency by Investment to UK, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency by Investment solutions.
Iziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK noma nge-visa yabatshalizimali e-UK?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo ezokuhlala ngokutshala imali e-UK kusuka e-Asia, ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK kusuka e-Afrika, ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK kusuka eYurophu, ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK kusuka eNingizimu Melika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali e-UK kusuka eMalaysia, Residency by investing to UK from Bangladesh, Residency by invest to UK from Indonesia, Residency by invest to UK from Sri Lanka, Residency by invest to UK from Nepal, Residency by invest to UK from India and Residency ngokutshala imali e-UK kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali Okwe-UK
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali e-UK
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for UK
IPhalamende lase-United Kingdom House of Lords
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka wase-UK , onesibopho sokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe e-UK